जनप्रतिनिधिले बढाईचढाई कुरा गर्ने गर्छन् : हिक्मतबहादुर बस्नेत | दर्पण दैनिक
प्रकाशित मिति: २०७८ पुष २८ गते ०४:०७
यस वडाको समग्र विषयमा संक्षिप्तमा बताईदिनुस न ?
हामी निर्वाचित भएर आएपछि मानिसको अत्यन्तै आधारभुत आवश्यकताभित्र पर्ने स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, यातायात लगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्‍यौं । स्थानीय तहको सबैभन्दा नजिकको सरकार भनेको वडा नै हो । म निर्वाचित भएर आउँदा यस वडामा सरकारी जग्गा पनि थिएन । हाल ८ रोपनी सरकारी जग्गा छ । स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडी स्वास्थ्य जस्तो गम्भीर कुराको उपचार गर्न पनि कुनै स्वास्थ्य चौकी थिएन । त्यस्तो अवस्थामा म निर्वाचित भएर आएपछि मैले पाउने नियमित सवारी साधन भत्ता नलिई अस्थायी रूपमा स्वास्थ्य सेवा सुरु गरेँ । त्यस्तै शिक्षाको क्षेत्रमा भन्नुपर्दा यस वडामा रहेका जनसेवा आधारभुत विद्यालय, सरस्वती आधारभुत विद्यालय र सेतिदेवी आधारभूत विद्यालयको स्तरोन्नति गरियो । माध्यमिक विद्यालयको लागि पहल गरिरहेका छौँ । पूर्व तयारी गरिरहेका छौं । जनसंख्याको हिसाबले हेर्दा यो वडा लिखुपिके गाउँपालिकाकै दोस्रो ठुलो वडा हो । मावि संचालनको लागि भौतिक संरचनाहरु बन्दै छन । जब हाम्रो पूर्वतयारी अनुसार सबै काम पुरा हुन्छ त्यसपछि हामी माध्यमिक विद्यालय पनि संचालन गर्ने योजनामा छौँ ।
सरकारले विभिन्न शीर्षकमा भत्ताहरु दिदाँ पारदर्शिताको लागि बैंक खाता खोल्नुपर्ने नीति अबलम्बन गरेको छ, यस नीतिले अशिक्षित व्यक्तिलाई कतिको असर पार्दोरहेछ नि ?
मैले विगतको वर्षहरुमा चाँही सरकारले दिने जेष्ठ नागरिक भत्ता, वृद्ध भत्ता,अपांग भत्ता लगायतका भत्ताहरु सम्बन्धित व्यक्तिहरुको घरघरमै गएर वितरण गर्ने गर्थें । साथै उहाँहरुसग भलाकुसारी पनि गर्ने गर्थें । हाम्रो टिममा स्वास्थ्यकर्मी लगेर उहाँहरुको स्वास्थ्य स्थिति पनि जाँच गर्दै चार वर्ष चलाएँ । तर गत वर्षबाट नै राज्यले ताकेता गरेर सिस्टममा जान चिठी आएको आयै गर्‍यो । सिस्टम के हो त भन्दा हरेक व्यक्तिको आर्थिक कारोबार पारदर्शिता हुनुपर्छ भन्ने नीति हाे । यो सकारात्मक पक्ष नै हो । सबैलाई एकैपटक बुझाउन गार्‍हो छ । हुन्छ पनि । पहिला हाम्रो भत्ता घरमै आउँथ्यो । अहिले घरमै भत्ता आउन छाड्यो यो तपाईंहरुले नै गर्नुभएको हो भनेर केही आमाबुबाहरुको गुनासो पनि गर्नुहुन्छ । तर त्यसो होईन, हामीले त राज्यले ल्याएको नीति निर्देशनलाई पालना गरेका हौं । अब उहाँहरुले पनि बिस्तारै बुझ्दै जानुहुन्छ । यो सिस्टम लागु भएको पहिलोपटक भएकोले बुझ्न अलि गार्‍हो भएको हो । हामीले आफ्नो वडा वा वडाबासीलाई पाएक पर्ने जुनसुकै बैंक भएपनि उनिहरुसँग समन्वय गरेर आर्थिक कारोबार पारदर्शिताको लागि खाता संचालन गरेका छौँ । हाम्रो वडाको हकमा भन्नुपर्दा लिखुपिके ५ नम्बर वडाको किन्जा बजारमा रहेको सनराईज बैंकको शाखामा कारोबार गर्ने गरेका छौं ।
सडक निर्माणकार्य कति भएको छ नि ?
ठ्याक्कै यति नै किलोमीटर बाटो बन्यो भन्ने चाही हामीले पनि डाटा राखेका छैनौं । बढाईचढाई कुरा गर्ने जनप्रतिनिधिहरुको चलन छ । म त्योभन्दा बाहिर छु । म सत्यतथ्य र प्रमाणको आधारमा कुरा गर्छु । लिखुपिके ३ को खाप्टेलबाट लिखुपिके ४ हुँदै लिखुपिके ५ को किन्जासम्म पुग्ने पर्यटन-कृषि सडक भनेर पहिला नै ट्र्याक खोलिएको थियो । त त्यो पुरा भएको थिएन अर्थात् किन्जा सम्म नै ट्र्याक खोलिएको थिएन । हाम्रो वडामा ३.५ किलोमिटर बाटो पर्छ । त्यो ग्राबेलिङ र सोलिङ भैसकेको छ । नाली बाहेकका सबै काम भएको छ । यस सडकमा बार्‍है महिना सवारी साधन चल्न सक्ने अवस्था छ । लिखुपिके ४ र ५ नम्बर बिचमा किन्जा खोला बहन्छ । उक्त खोलामा पुल हाल्न बाँकी छ । यही कारण सडकको अवस्था राम्रो हुँदाहुँदै पनि वर्षादको समयमा गाडी चलाउन कठिनाइ परेको छ ।
किन्जा खोलामा पक्की पुल निर्माण गर्न नसक्नुको कारण सम्बन्धित निकायसग समन्वयको अभाव भयो या बजेटको अभाव हो ?
सडकको बजेट चाँही कस्तो रहेछ भने सडक डिभिजन कार्यालय अन्तर्गत संचालित हुँदोरहेछ । यो सडकलाई चाँही हामीले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्ने क्रममा छौँ । म राज्यको सबैभन्दा तलको तहमा काम गर्ने जनप्रतिनिधि हुँ । तलको भूभागका धेरै फाइलहरु अगाडि बढ्दैनन । सायद राज्यको नियम नै त्यस्तै भएर होला । यो हिजोदेखि चलेको प्रचलन हो । मैले यो पुलको विषयमा पटकपटक फाइल अगाडी बढाएँ । धेरै सडक बनाउन सकिने तर एउटै पुल बनाउन धेरै खर्च लाग्ने भएकोले पनि पक्की पुलहरु बनाउन समस्या पर्दो रहेछ । अर्को कुरा गाउँपालिकाले आवश्यक पहल नगरिदिदाँ पनि यो पुल बन्न नसकेको हो ।
अन्य सडक निर्माणका कुराहरुमा चाँही मैले यहाँलाई नामै दिदाँ राम्रो होला । उप्चाङ, फोती, रिनडाँडा र चौरीखर्क जाने बाटो, त्यस्तै अर्को लिखुपिके ३ को जोगीडाँडाबाट खहरे बुलडाँडा हुँदै लाममानेसम्म ट्र्याक खोलेका छौँ । भौगोलिक बनावटको हिसाबले एउटा लेकको बाटो, अर्को बिचको बाटो र तल्लो बाटो गरेर सबैलाई सहज हुने गरी सडक निर्माण गरेका छौँ । केही ठाउँमा सानोतिनो विवादका कारण सडक निर्माण कार्यमा अबरोध भएको छ । त्यो पनि समाधान हुने पक्षमा नै छ । समग्रमा भन्नुपर्दा एकादुई घर छुटेपनि प्रायः सबै बस्तीसम्म रोड पुगेको छ । हामी बढी ट्र्याक खन्ने भन्दा पनि खनेको ट्र्याकलाई कसरी व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ भन्नेतिर लागिरहेका छौं ।
अब राजनीतिक कुराकानीतर्फ लागौं, पार्टी एकता र पार्टी टुट्फुट वा गुडबन्दिले स्थानीय तहमा काम गर्न कतिको असर पार्दोरहेछ ?
राजनीति भनेको राज्यको मुख्य नीति हो । राजनीति गर्ने व्यक्तिसँग लक्ष, उद्देश्य र योजना हुनुपर्छ । योजना भएको पार्टीमा लाग्दा विधिविधान हुन्छ । नीतिनियम हुन्छ । कार्यदिशा हुन्छ । म पार्टीले दिएको घोषणापत्रको आधारमा निर्वाचित भएँ । मैले पार्टीले दिएको घोषणापत्रलाई आधार बनाएर यहाँको भूवनावट अनुसार काम गरेको छु । यस वडामा १७ सय त्रियासी घरदुरी छन । ती प्रत्येक घरका धाराहरुमा पानी आउँछ । केन्द्रिय राजनीतिक क्रियाकलापले स्थानीय तहमा पनि केही असर त पर्छ नै तर आफ्नो योजना अनुरुप काम गर्नुपर्छ ।
यस वडाको कृषिको अवस्था कस्तो छ ?
हामीले यस वडामा किबी र चिया खेतीलाई मुख्य रूपमा अगाडी बढाएका छौँ । त्योभन्दा पहिला अलैंची खेती पनि थियो । तर अहिले अलैंचीमा रोग आएको हुनाले अलैंची खेतीका लागि अलि समस्या देखापरेको अवस्था छ ।
हामी जनप्रतिनिधिहरु असल काम गर्नको लागि आएका हौं । त्यसैले हामीले असल काम नै गर्नुपर्छ । अबको योजना भनेको दिगो विकासको लागि अगाडी बढ्नु नै हो । यसमा मिडियाहरुले पनि भएका कुरा सत्यतथ्य रुपमा अगाडी ल्याउन जरुरी छ । कुन वडा कस्तो छ भन्ने पनि मिडियाबाट नै थाहा हुन्छ । त्यसको लागि मिडियाको साथ अत्यन्तै आवश्यक छ ।
वडा अध्यक्ष भएर कार्यसम्पादन गर्दै गर्दा के कस्ता चुनौतीहरु आउँदा रहेछन ?
म पहिलादेखि नै सामाजिक काम गर्न रुचाउने मान्छे हुँ । अहिले जनप्रतिनिधि भएर आएपछि विभिन्न व्यक्तिको काममा जान पाउँदा अत्यन्तै मजा लागिरहेको छ । मलाई समाजमा प्रत्यक्ष रूपमा काम गर्दा खुसी लागेको छ । कुनै पनि ठाउँमा समस्या पर्दा मलाई बोलाईदिउन भन्ने लाग्छ । त्यस्ता समस्या परेको ठाउँमा जान पाँउ भन्ने लाग्छ । कहिलेकाहीँ आउने टच्चरहरुलाई सहज रूपमा लिदैँ फेस गर्छु ।
स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वर्ष हुदै छ, फेरि पनि तपाईंको उम्मेदवारी रहन्छ कि ?
त्यो चाँही यस्तो छ, पार्टीले एउटा निर्णय गर्छ । म मेराे पार्टी नेकपा एमालेको निर्णय मान्ने कार्यकर्ता हुँ । त्यसकारण पार्टीले गरेको निर्णय नै मेरो लागि सही हुनेछ । फेरि पनि पार्टीले तपाईं वडामा बस्नुस भन्यो भने पनि म तयार छु, होईन अब तपाईं आराम गर्नुस भनेपनि म तयार नै छु । त्यसैले अहिले नै म पार्टीको निर्णय दिन सक्दिनँ ।
२०७८ पुष २६ गते ०९:३५